Ny hamisavisana ny soa, hialan’ny ratsy… | NewsMada
Ny hamisavisana ny ratsy, hiavian’ny soa. Mahazatra izay, mampahazo vahana ny fanahiana aza. Raha ny toe-draharaham-pirenena sy ny fiainam-bahoaka ankehitriny, maso miara-mahita: be lavitra noho ny tsara ny ratsy, tsy hita hotanisaina? Ny fandio iray siny, hono, tsy mahaleo ny fandoto iray tandroka. Vao mainka izay fandio iray tandroka hahaleo ny fandoto iray siny, raha be lavitra noho ny tsara ny ratsy.
Ndeha hotanisaina lava eto ve ny ratsy hoe mba hiavian’ny soa? Ny tsy fandriampahalemana, ny tsy fisian’ny asa, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny tondra-drano, ny kere… Aiza izay hiavian’ny soa amin’izany, raha mbola be hatrany ny ratsy afitsoky ny mpitondra sasany? Fanaovana gaboraraka ny harem-pirenena, fisian’ny kolikoly avo lenta, fanamparam-pahefana lava, ny tsy fangaraharana amin’izay atao…
Misy antony ao, matoa mbola tadiavina sy iadian’ny fiombonambe iraisam-pirenena sy ireo mpiara-miombon’antoka hatrany ny hoe fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana, ady amin’ny kolikoly. Miankina amin’izay ny fahazoana trosa sy fanampiana. Efa famisavisana ny tsara hialan’ny ratsy ireo? Tsy maintsy misy hatrany ny asa ratsy sy ny mpanao ratsy, fa mba mila atomboka sy omena vahana amin’izay ny tsara.
Inona ny tsara hovisavisaina amin’izao? Be tokoa ny ratsy, na ny resaka. Difotra amin’izany izay heverina ho tsara. Tsy tokony hampiray hina ve, ohatra, ny tanindrazana iombonana? Nefa mampisara-bazana ny samy Malagasy izao ny fitakiana ireo Nosy malagasy manodidina. Toy izany koa ny fisian’ny kere any atsimo na ny tondra-drano any avaratra, tokony hampiombona samy Malagasy, manetsika hambom-po.
Ny hafahafa, mahavariana sy mahasaikatra: saika mibahan-toerana hatrany ny ratsy, na amin’izay lazaina aza. Hany ka mila tsy handaitra na inoan’ny sasany intsony izay fampanantenana, fanentanana, fahavononana… Tsy hay intsony ny manavaka ny tsara sy ny ratsy? Na ny tena ady sy ny sarin’ady… Tsy mandaitra na tsy manan-danja intsony ny famisavisana lava, fa asa mivaingana avy hatrany amin’izay?